यो हो एक सेकेण्डमै गरीबीलाई चट् पार्ने र धनी बन्ने उपाय ! - inaruwaonline.com
यो हो एक सेकेण्डमै गरीबीलाई चट् पार्ने र धनी बन्ने उपाय !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ०७, २०७३ समय: ३:१५:०१
एजेन्सी । वास्तवमा मानिस जति धनी बन्दै गयो उति नै उसलाई अझ बढी धनी बन्ने इच्छा जागेर आउँछ । नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन विश्वभर नै धनी र गरीबबीच एउटा अचम्म किसीमको दूरी छ । मानिसहरु गरिब भएकै कारण आफूलाई अभागी र असफल ठान्छन् । तर, वास्तवमा त्यसो होइन । भगवान गौतम बुद्धले एक ब्यक्तिको ‘म कसरी गरीब भएँ’ भन्ने प्रश्नमा दिएको उत्तरले तपाईंलाई लाग्नेछ कि वास्तवमै हामी कति धनी रहेछौँ र तपाईंको गरीबी एकै छिनमा हटेर जानेछ ।
त्यत्तिकैमा बुद्धले मुस्कुराउँदै जवाफ दिए, ‘तिमीले आफ्नो अनुहारबाट कसैलाई पनि मिठो मुस्कान दिन सक्छौँ । तिमीसँग दुई हात छ आवश्यक पर्दा सघाउन सक्छौँ । तिमीसँग मुख छ मिठो बोल्न र कसैको प्रशंसा गर्न सक्छौँ । अनि तिमी कसरी गरीब भयौँ । गरीबी तिम्रो मनमा छ । जब मनबाट यो भ्रम हटाउनेछौँ तब तिम्रो गरीबी पनि आफै हटेर जानेछ ।’